Madaxweyne Farmaajo Miyuu U Badheedhay Halista Buuraha Galgala ? + [ Akhriso ]
Thursday January 11, 2018 - 20:06:30 in Wararka by Super Admin
Garoowe (Ilays-News):- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa galay safarkiisii
ugu dheeraa ee dhul Soomaaliya kamid ah uu ku maro inta uu madaxweynaha ahaa.= ku marayaa maamulka Puntland
Wuxuu gaadhi ku socday qiyaastii 440km oo ah dhulka u dhaxeeya Garowe iyo Boosaaso. Ammaanka madaxweynaha waxaa sugaya ciidamada dowlad goboleedka Puntland iyo ilaalo gaar ah oo Muqdisho kala safaray.
Qiyaastii 200 ilaa 300 oo dagaal yahan oo uu hoggaamiyo Sheekh Cabdulqaadir Muumin oo horay uga tirsanaa Al-shabaab balse ka goostay oo ku biiray ururka la baxay dowladda Islaamka oo si aad ahan u hubeysan ayay fariisin u tahay buuraha Galgala oo qiyaastii 60 Kiiloomitir Boosaaso u jira.
Madaxweynuhu waxa uu safarkiisa ugu magacdaray Socdaalka nabadda, balse mar walba oo uu woqooyi u sii dhowaada waxaa kor u kacaya cabsida laga qabo weerarro qorsheysan oo kaga yimaada kooxda la sheegay in ay taabacsan tahay ururka la baxay dowladda Islaamka oo ku dhuumanaya Galgala oo marin u ahayd kolonyadii madaxweynaha.
Kooxaha safarka madaxweynaha khatarta ku ahaa kuma koobnayn ururka la baxay dowladda Islaamka oo kaliya ee waxaa iyana meel Puntland ka mid ah jooga kooxo lala xidhiidhiyo ururka Al-Shabaab.
Amaanka ayaa aad loo adkeeyay inta udhaxeeysa Bosaaso iyo Tuulada kala bayr oo ah dhul buuraley ah. kooxda alshabaab ayaa meelo ka mida fariisimo Ku leh sida la sheegay.
"ciidamo badan ayaa waddada jooga waxayna ku hubeeysnyihin gadiidka dagaalka", ayuu yidhi saxafi ka mid ah safarka wafdiga madaxweyne Farmaajo.
Bishii Maarso ee sannadkii la soo dhaafay ayaa koox dagaalyahanno ah oo ka badnaa 100 ay doon ku gaadheen deegaanka Garacad ee gobolka Mudug. Kooxdaasi waxay ka tirsanaayeen ururka Al-shabaab.
Balse safarka Madaxweyne Farmaajo lama uusan kulmin wax caqabad ah, taas oo calaamad u noqon karta in amniga goobaha qaar uu soo hagaagayo, ama waxaa suuragal ah in "kooxaha hubeysan aysan dooneyn in dagaal culus ay kala kulmaan ilaalada madaxweynaha.
"Inkasta oo Puntland ay digtoon tahay, ammaankana ay aad u adkeysay, haddana marka laga hadlayo aagga Galgala wax walba ayaa laga fili karaa sidaas darteed waxaa ila qunneyd in uu madaxweynuhu diyaarad u qaato Boosaaso" ayuu yidhi Rooboow.
Deegaano kala duwan ayuu ku hakaday madaxweynahaLahaanshaha sawirkaSONNA
Puntland waxa ay guluf dagaal ku qaadday buuraleeyda Galgala, waloow ay u muuqato in halista kooxaha IS ay hoos u dhacday haddana wali waxaa jira deegaanna aysan ciidammada dowladda gaarin oo iska hor imaadyo joogta ah ay ka dhacaan, waxaa intaa dheer weeraro gaadmo ah oo lala beegsado ciidammo kala duwan.
Dowladda Soomaaliya ayaa u fursad u aragto in ay gaarto dadka ku nool deegaannada fogfog, basle mas'uuliyiinta dowladda ayey ku adag tahay in ay dhulka ku safraan marka laga hadlayo Koofurta Soomaaliya oo ay ku xooggan yihiin dhaqdhaqaaqa Al-shabaab.